1 Madzimambo 12:1-33
12 Zvino Rehobhoamu+ akaenda kuShekemu, nokuti vaIsraeri vose vakauya kuShekemu+ kuzomugadza kuti ave mambo. 2 Jerobhoamu+ mwanakomana waNebhati paakangozvinzwa, achiri kuIjipiti (nokuti akanga atiza Mambo Soromoni, kuti Jerobhoamu agare kuIjipiti),+ 3 vakabva vatumira shoko, vakanomushevedza. Pashure paizvozvo Jerobhoamu neungano yose yaIsraeri vakasvika, vakatanga kutaura naRehobhoamu, vachiti:+ 4 “Baba venyu vakaita kuti joko redu rireme, saka zvino imi rerutsai+ basa rakaoma rababa venyu nejoko rinorema+ ravakaisa patiri, uye tichakushandirai.”+ 5 Iye akati kwavari: “Endai kwemazuva matatu, muzodzoka kwandiri.”+ Naizvozvo vanhu vakaenda. 6 Mambo Rehobhoamu akatanga kurangana nevarume vakuru+ vaishandira baba vake Soromoni nguva dzose pavakanga vachiri vapenyu, achiti: “Mungandipa zano ripi rokuti ndipindure vanhu ava?”+ 7 Naizvozvo vakataura naye, vachiti: “Nhasi kana uchizova mushandi wevanhu ava, wovashandira,+ vapindurewo, wotaura navo mashoko akanaka;+ uye vachatova vashandi vako nguva dzose.”+ 8 Zvisinei, akasiya zano revarume vakuru ravakanga vamurayira, akatanga kurangana nemajaya aakanga akura pamwe chete nawo,+ aimushandira.+ 9 Akati kwaari: “Nderipi zano+ ramungapa kuti tipindure vanhu ava vataura neni, vachiti, ‘Tirerutsirei joko rakaiswa patiri nababa venyu’?”+ 10 Majaya acho aakanga akura pamwe chete nawo akataurawo naye, achiti: “Iti+ kuvanhu ava vataura newe, vachiti, ‘Baba venyu vakaita kuti joko redu rireme, asi imi tirerutsirei’; taura navo uti, ‘Munwe wangu muduku uchava mukobvu kupfuura hudyu dzababa vangu.+ 11 Baba vangu vakakutakudzai joko rinorema; asi ini ndichawedzera joko renyu.+ Baba vangu vaikurovai netyava, asi ini ndichakurovai netyava dzine zvinobaya.’”+ 12 Zvino Jerobhoamu nevanhu vose vakauya kuna Rehobhoamu pazuva rechitatu, sezvakanga zvataurwa namambo, achiti: “Dzokai kwandiri pazuva rechitatu.”+ 13 Mambo akatanga kupindura vanhu nehasha,+ akasiya zano revarume vakuru ravakanga vamupa.+ 14 Akataura navo maererano nezano remajaya,+ achiti: “Baba vangu, vakaita kuti joko renyu rireme, asi ini, ndichawedzera joko renyu. Baba vangu, vakakurovai netyava, asi ini, ndichakurovai netyava dzine zvinobaya.”+ 15 Mambo haana kuteerera vanhu,+ nokuti Jehovha ndiye akaita kuti zvinhu zvichinje,+ kuti aite shoko rake+ iro Jehovha akanga ataura kuna Jerobhoamu mwanakomana waNebhati achishandisa Ahija+ muShiro. 16 VaIsraeri vose pavakaona kuti mambo akanga asina kuvateerera, vanhu vakabva vapindura mambo, vachiti: “Tine mugove wei kuna Dhavhidhi?+ Hakuna nhaka kumwanakomana waJese. Haiwa imi vaIsraeri, endai kuna vanamwari+ venyu. Haiwa Dhavhidhi,+ chizvionera zveimba yako!” Naizvozvo vaIsraeri vakaenda kumatende avo. 17 Asi vanakomana vaIsraeri vaigara mumaguta aJudha, vakaramba vachitongwa naRehobhoamu.+ 18 Mambo Rehobhoamu akazotuma Adhoramu,+ aitarisira vaya vakanga vatorwa nokuda kwebasa rokumanikidzirwa,+ asi vaIsraeri vose vakamutema nematombo,+ zvokuti akafa. Mambo Rehobhoamu akakwanisa kukwira mungoro yake kuti atizire kuJerusarema. 19 VaIsraeri vakaramba vachimukira+ imba yaDhavhidhi kusvikira nhasi.+ 20 Zvino vaIsraeri vose pavakangonzwa kuti Jerobhoamu akanga adzoka, vakabva vatumira shoko, vakamushevedza kuti auye kuungano, vakamuita mambo wevaIsraeri vose.+ Hapana akava muteveri weimba yaDhavhidhi kunze kworudzi rwaJudha chete.+ 21 Rehobhoamu paakasvika kuJerusarema,+ akabva aunganidza imba yose yaJudha nedzinza raBhenjamini,+ varume vakasarudzwa nokuda kwehondo, zviuru zana zvine makumi masere, kuti vanorwisa imba yaIsraeri, vadzose umambo kuna Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni. 22 Shoko raMwari wechokwadi rakabva rasvika kuna Shemaya+ munhu waMwari+ wechokwadi, richiti: 23 “Iti kuna Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni mambo waJudha nokuimba yose yaJudha naBhenjamini nevamwe vanhu vose, 24 ‘Zvanzi naJehovha: “Musaenda kunorwisa hama dzenyu vanakomana vaIsraeri.+ Mumwe nomumwe ngaadzokere kumba kwake, nokuti chinhu ichi chaitika zvichibva kwandiri.”’”+ Naizvozvo vakateerera shoko raJehovha,+ vakadzokera kumba maererano neshoko raJehovha.+ 25 Jerobhoamu akavaka Shekemu+ munzvimbo ine makomo yaEfremu akagaramo. Akabva abuda imomo akavaka Penueri.+ 26 Jerobhoamu akatanga kuti mumwoyo make:+ “Zvino umambo huchadzokera kuimba yaDhavhidhi.+ 27 Kana vanhu ava vakaramba vachienda kunopa zvibayiro muimba yaJehovha iri kuJerusarema,+ mwoyo yevanhu ava ichatodzokerawo kunashe wavo, Rehobhoamu mambo waJudha; uye vachandiuraya,+ vodzokera kuna Rehobhoamu mambo waJudha.” 28 Naizvozvo mambo akarangana nevamwe,+ akagadzira mhuru+ mbiri dzendarama, akati kuvanhu: “Kuenda kuJerusarema kwakakuomerai. Haiwa imi vaIsraeri, heuno Mwari+ wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti.”+ 29 Akabva aisa imwe kuBheteri,+ uye imwe yacho akaiisa kuDhani.+ 30 Chinhu ichi chakaita kuti vanhu vatadze,+ uye vanhu vakatanga kuenda pamberi peyaiva kuDhani. 31 Zvino akatanga kuvaka imba yenzvimbo dzakakwirira+ uye kugadza vapristi achivatora pavanhuwo zvavo, vakanga vasiri vevanakomana vaRevhi.+ 32 Jerobhoamu akaita mutambo mumwedzi wechisere pazuva rechigumi nemashanu romwedzi wacho, somutambo waiva muJudha,+ kuti apisire zvinopiwa paatari yaakanga agadzira kuBheteri, kuti abayire kumhuru dzaakanga agadzira; uye kuBheteri+ akagadza vapristi vaishumira venzvimbo dzakakwirira dzaakanga agadzira. 33 Akatanga kupisira zvinopiwa paatari yaakanga agadzira kuBheteri pazuva rechigumi nemashanu mumwedzi wechisere, mumwedzi waakanga afunga hake;+ uye akaitira vanakomana vaIsraeri mutambo, akapisira zvinopiwa paatari kuti akwidze utsi hwezvibayiro.+